तथ्य जाँच: कोरोनाभाइरसको लागि तातो चिया र बाफ - THIP Media
Choosealanguage English भोजपुरी नेपाली
के कोभिड-१९ को औषधि को लागि चीन चिन्तित छैन?
के चियाले कोरोना भाइरसलाई मार्न सक्छ?
के तातो पानी खाएर कोरोनाभाइस मार्न सकिन्छ?
एउटा सोसल मिडिया पोष्टमा एक जना प्रयोगकर्ताले यसो लेखेको छ, “चिनियाँहरु कोरोना भाइरस को लागी कुनै औषधि वा कुनै खोप सेवन गरिरहेका छैनन्। प्रत्येक घर कोरोना भाइरसको केस रहेको छ। उनीहरू उपचारका लागि अस्पताल जान बन्द गरेका छन्। उनीहरु बरु ताप द्वारा भाइरसलाई मार्ने गरेका छन्। दिनमा ४ पटक भाँडा बाट धेरै तातो बाफ श्वास द्वारा लिन्छन। दिनमा ४ पटक तातो पानीले गार्गल गर्छन। दिनमा ४ पटक तातो चिया खान्छन। भाइरस ४ दिनमै मर्छ। पाँचौं दिन तिनीहरूको कोरोना संक्रमण समाप्त हुन्छ। ”
पोष्टको एउटा स्न्यापशट तल दिइएको छ र यसको संग्रहित संस्करण यहाँ हेर्न सकिन्छ।
यो एक नक्कली दाबी हो र हामीले पहिला पनि तथ्य जांच गरिसकेका अन्य दावीहरू जस्तै मिल्दोजुल्दो रहेको छ। तपाईंले ति दाबीहरूको बारेमा यहाँ र यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ।
चिनियाँ शोधकर्ताहरु निरन्तर कोभिड-१९ निको पार्ने औषधिको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले जापानी फ्लू औषधि (स्रोत) को परिक्षण गरिरहेको बारेमा यहाँ एउटा रिपोर्ट छ र चीनले कोभिड-१९ औषधि (स्रोत) खोज्ने प्रयासमा क्लिनिकल परीक्षणको लागि अग्रसर रहेको रिपोर्ट यहाँ छ।
होइन। यो गलत दाबी संसार भरिका तथ्य जांचकर्ताहरु द्वारा खारेज गरिएको छ। तपाईंले पनि यस बारेमा यहाँ, यहाँ र यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ।
होइन। मिल्दोजुल्दो विषयमा हामीले तथ्य जाँच गरिसकेका छौं। यसको बारेमा यहाँ पढ्नुहोस्।
के तातो पानी खानु सामान्यतया शरीरको लागि राम्रो बानी हो? हो, आयुर्वेदको अनुसार तातो पानी खाँदा केही फाइदाहरू हुन्छन्। हामीले यस बारेमा यहाँ एक विस्तृत लेख प्रस्तुत गरेका छौं।
Previous articleफाबिफ्लु बिरुद्ध लिवफाविर: मूल्य भिन्नता को सन्देश नक्कली छ
Next articleकोभिड-१९ को घरेलु उपचारको बारेमा टाटा हेल्थको सल्लाह नक्कली र खतरनाक थियो